November 2010 – Everybody Read TChen
in 1B has burn marks on her hands.
As she sleeps, I let myself stare
if it wasacooking accident
She boarded quietly,
grazed me with
the sleeve of her business jacket lifts, revealing
a neat row of round burn marks
all up her forearm.
Was she hurt asachild?
Was italate husband,
mean boyfriend, crazy sex fetish?
I try to catch the title
It’s just some mystery novel
I can tell/I’m making her/uneasy.
I go back to my writing.
She looks so hard-alot of women in L.A.
Dark secrets hunting her insides,
softness sucked out,
a deep sadness in her eyes.
ကျမ ရဲ့ဘေးက ခုံ ဘီ ၁ မှာ ထိုင်နေတဲ့
မိန်းမရဲ့ လက်တွေပေါ်မှာ မီးလောင်ရာတွေရှိပါတယ်
သူမအိပ်နေတဲ့အခါ အဲ့ဒီ ဒဏ်ရာတွေကို
သူမ ဘယ်လိုများရလာတာလဲ လို့ အတွေးနယ်ချဲ့ရင်း
ချက်ရင်း ပြုတ်ရင်း မတော်တဆ ရတာလား
သူမ ကားပေါ်ကို တက်လာတုံးကတော့
ဒါပေမယ့် သူမ မျက်လုံးတွေက
ကျမ ကိုခါးသက်သက် မုန်းတီးမှုအပြည့်နဲ့
ခုတော့ သူမ နိူးလာပါပြီ
ကျမ မျက်လုံးတွေ ကို သူမဆီကနေ ခွာပြီးတော့
သူမ အပေါ်အင်္ကျီ လက်က တက်သွားတဲ့ အတွက်
သူမကလေးအရွယ်က ရခဲ့တဲ့ နှိပ်စက်ရာတွေလား
သေသွားတဲ့ ယောက်ျား ဒါမှမဟုတ်
လိင်မှုဆိုင်ရာ စိတ္တဇ ရှိသူတယောက်ယောက်လား
ကျမ စာအုပ် ခေါင်းစဉ်ကို
ရိုးရိုးသာမာန် လျှို့ဝှက်သည်းဖို ဝတ္ထု တအုပ်ပါပဲ
သူမ စိတ် အနှောင့်အယှက်မသက်မသာ
ကျမ ရေးလက်စ စာဘက်ပဲ ပြန် အာရုံစိုက်နေလိုက်တယ်
L A မှာ ရှိတဲ့ မိန်းမ တော်တော်များများ လိုပါဘဲ
ခပ်မှောင်မှောင် လျှို့ဝှက်မှုတွေက အတွင်းလှိုက်စားလို့
Posted on November 23, 2010 February 7, 2018 Categories jewel's ကဗျာများ, Uncategorized, Uncategorized2 Comments on 1 B
ည ၁၂ နာရီ မကျော်စေရဘူး
ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ လို့
Posted on November 15, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများ7 Comments on ပျော်ရွှင်တဲ့ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ
အာပလာ ဆားချက် (မဘတ်ချင်မဘတ်နဲ့)
ကဗျာ တပုဒ် မွေးဖွားခြင်း သို့ အင်စပရေးရှင်းရှာခြင်း သို့ အာယား လျာယား ရှိမိခြင်း သို့ ကိုယ်စာတွေ ဘယ်လိုရေးမိစေသလဲ ဘယ်လိုဝေဖန်မှုတွေ ပေးတတ်သလဲ သိစေချင်တာ ပါ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ဆားချက်တာပေါ့ တင်စရာမရှိလို့ ကြုတ်ကြက်လိ လိုက်တာ ကြိုက်သော်ရှိမကြိုက်သော်ရှိပေါ့နော် တခုခု ရတယ်ဆိုရင်တော့ လဲ ကောင်းတာပေါ့ တယ်တော့မထင် 3:17 PM me: ကော်ဖီခွက်လဲအေးနေပြီ
နင်လေ ငါ့လဲ မေ့နေပြီ
ဆွေးနေသေးသည် 3:20 PM BS: မနက်ခင်းလည်း အေးလာပြီ
နင်လည်း လွမ်းဖို့ မေ့တတ်ပြီ
3:28 PM me: နင်အဲ့လိုရေးလိုက်တော့ ငါဆက်မရေးတတ်တော့ဘူးဟ ဟိဟိ BS: ဟဲ့ဘာလို့တုန်း ပုံစံဆင်နေလို့လား me: မဟုတ်ဘူး အကြောင်းအရာ ရှာမရတော့လို့ 3:29 PM နေအုံ အုံး နင်တခုခု ထပ်ရေးကြည့် အီး လိုဖြစ်ဖြစ် စကားမစပ် နင်ဘာတွေ လုပ်နေတာတုံး တော်တော်သံချေးတက်သွားတယ်နော် BS: ဝေါအိတ်ဒ်ဒေးအတွက် ဂရက်ထနေတာဟ 3:30 PM အင်း ငါ သိပ်မရေးဖြစ်ဘူး me: မဟုတ်ဘူး BS: သူများရေးတာတွေပဲဖတ်နေတာ အခုတလောက me: ရေးထားတာတွေ မကောင်းဘူးလို့ပြောနေတာ BS: အေးလေ သြော အိုကေ ငါ့ဟန်နဲ့ငါ ပြောင်းရေးကြည့်မယ် နေဦး 3:31 PM ငှင်းငှင်း 3:32 PM me: အာ မဟုတ်ဘူး နင်ခုတလော ရေးတဲ့ အီး ကဗျာတွေ က မကောင်းဘူးလို့ 3:33 PM နင့်အီးတွေ သံချေးတက်နေပြီလို့ပြောတာ နင်အရင် အက်ဆေးတွေ ရေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်လေ ခုတလော နင့်ကဗျာတွေ ဟို ပိုးဟပ် တို့ ဘာတို့ တော်တော်ညံ့တယ် ဘုတ်ဆုံ ကွာလတီ မမှီဘူးလို့ပြောချင်တာ BS: ဟေ 3:34 PM ငါ့ကို အဲလို feedback ပေးမယ့်သူလည်းမရှိဘူးလေဟာ 3:36 PM နေမထွက်ခင် အေးခဲသွားတတ်တဲ့
မတရားဘူးဟာ . . . ဆိုတဲ့ရှိုက်သံတစ်ဝက်
ခြစ်ခြစ်တောက်အောင် . . . . ခါးတယ်။ me: စကားမစပ် နင့်စာတွေနင်အကုန်ကူးထားလား BS: ဟင့်အင်း me: အဲ နေအုံး ငါအားရင်လုပ်ပေးမယ် 3:37 PM ဒါပေမယ့် မာတီပလိုင်းက ဝင်မထားရင် ဘတ်လို့တောင်မရဘူးမှလား BS: အေး ဟုတ်တယ်ဟ တချို့ဟာတွေကို ငါက ငါ့ဘော်ဘော်တွေပဲ တွေ့ရအောင်လုပ်ထားတာ ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ် 3:38 PM me: အေး ငါ့ကိုလင့်ခ်ပေး BS: www.botesone.multiply.com 3:39 PM me: နင်က ခွဲမှတ်ထားလား ငါ့လို ကက်အလိုက်လေ နင့်ဓါတ်ပုံပိုစ့်တွေတော့ မယူဘူးလေ နော် ကဗျာတွေ စာတွေပဲ BS: ဟားဟား အေးပါ ဓာတ်ပုံတွေက အရမ်း personal ဖြစ်တယ် ခိခိ 3:40 PM me: အဲ့တာဆို နင့် စာလင့်ပဲတိုက်ရိုက်ပေး ငါကူးပေးမယ် 3:41 PM BS: အိုကေသယ်ရင်း me: ကောမန့်တွေကော ယူမလား မယူတော့ဘူးနော် ငါပို့ပေးကြည့်မယ် BS: ဟင့်အင်း ကွန်မန့်တော့ မလိုချင်ဘူးဟ 3:42 PM http://botesone.multiply.com/journal 3:43 PM me: ကြည့်ကြည့်လိုက် အခုပို့လိုက်တယ် 3:44 PM နင့် ဘိုစာတွေက တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်သလို ဖြစ်နေတယ် ငါဥပမာ တခု ပို့ပြမယ် နင်ရေးတာ အဲ့လိုဖြစ်နေတယ် ဥပမာ ဟာ ငါတို့ မြန်မာ လိုပြောသလိုမျိုး ဘိုတွေက မပြောဘူးလေ 3:45 PM ငါ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရေးတာ နင့်ကိုပြမယ် ကောင်းလို့ မဟုတ်ဘူး မကောင်းလို့ နင်ရှောင်လို့ရအောင်နော် 3:46 PM [Jh hey still there
3:59 PM BS: အေး သယ်ရင်း ရှူရှူသွားပေါက်တာ နေဦး ငါဖတ်ကြည့်လိုက်မယ် me: ကြာ်လိုက်တာ နင်တော်တော်အကြောရှည် 4:00 PM အေး ငါပြောချင်တာ ခုနက ငါနင့်ကို still there လို့မေးတယ် အြ့တာ နင်ရှိသေးလားလို့ ငါပြောချင်တာ အဲ့တာကိုနင်လဲသိတယ် တခါတခါကျတော့် ငါတို့က မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီး အီးလိုရေးတဲ့ အခါကျရင် BS: အေး .. ပြော me: နင်တည်ရှိနေသေးလားလို့ ရေးမိတတ်တယ် ပေါက်လား ဟိဟိ 4:01 PM ငါကများ နင့်ကိုဆရာလုပ်နေသေးတယ်နော် နင့်အီးက ငါ့ထက်ပိုကောင်းတာ ကိူ အန်နတီးဝေး BS: အေး ပေါက်တယ် me: သယ်ရင်း BS: နိုးနိုး me: နင်ဒေါင်းကြည့်ပြီးပြီလား ငါအခု ကော်ပီလုပ်နေတာ ပြီးတော့မယ် BS: အခုဒေါင်းမလို့သယ်ရင်း me: ပြီးရင် နင့်ကို ငါ ဝေ့ါကော ပီဒီအက်ဖ် ကော ပို့မယ် 4:02 PM ပြီးမှ နင် ပြန်အက်ဒစ်လုပ်လေ နင်တခြားဟာတွေ ယူထားတာ တာရာစာတွေ ဘာညာ လေ နင့် ကဗျာတွေချည်းပဲ ပြန်စုလေ အဲ့လိုပေါ့ BS: အိုကေ … သယ်ရင်း။ me: blogspot က တခုကောင်းတာ ဒီလို ကက်တွေခွဲလို့ရတယ် ဟ BS: ငါ အက်ဒစ်လုပ်ပြီးရင် နင့်ကို ပြန်ပို့ပေးမယ် me: ဒါတွေရှိတယ်
* cities thoughts (6)
* coffee table booklet (3)
* diary (24)
* Haikus (4)
* jewel’s songs ခံစားမှုများ (7)
* jewel’s ကဗျာများ (3)
* my sketches (drawing) (2)
* Scattering thoughts (13)
* tag (1)
* ကိုယ်ပိုင် English ကဗျာများ (17)
* ကိုယ်ပိုင် ကဗျာများ (50)
* စကားကြီးစကားကျယ် (1)
* ဆိုက်ကိုတက်စ် (3)
* တီချမ်း ခရီးသွားခြင်း (8)
* တီချမ်း ပုံပြောမယ် (2)
* တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း (24)
* တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ (36)
* တီချမ်းပြောတဲ့ အချစ် ဒဿနများ -၂ (9)
* တီတီချမ်း (14)
* တီတီချမ်း အင်တာဗျူး (3)
* ပုံတွေ (2)
* ဗဟုသုတများ (4)
* သက်တံ့ တွေရဲ့အဆုံးမှာ (ပေးစာများ) (49)
* သီချင်း ခံစားမှုများ (17)
* ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းလေးတွေ (1)
* အခန်းဆက်ဝတ္ထုရှည် (10)
* အတွဲ ကဗျာများ (32)
* အတွေးများ (1)
* ဆောင်းပါး (41)
* ပေးစာများ(letters) (22)
* မောင့် ကဗျာများ (3)
* မွေးနေ့ဆုတောင်း ကဗျာများ (12)
* ရောက်တတ်ရာရာ (19)
* ပြဇာတ် (1)
* ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း (5) အဲ့တာ ငါ့စာတွေ 4:03 PM လိုချင်တာ ရှာယု့ပဲ သိလား တွေ့လား နင်နဲ့ ငါစပ်တူရေးတဲ့ ကဗျာတွေ လိုချင်ရင် အတွဲကဗျာ ရှာလိုက်ရုံပဲ BS: အေးသယ်ရင်း 4:04 PM ဟေ့ .. ဘလော့စပေါ့နဲ့ ဝေါ့ဒ်ပရက်စ် ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ 4:05 PM လား 4:06 PM me: ငါကတော့ ဘလောခ်စပေါ့ ကိုပိုကြိုက်တယ် 4:07 PM ဒါပေမယ့် ပြဿနာက မြန်မာပြည်မှာ ဖွင့်မရတာပဲ ဘလောခ်စပေါ့က ဂူဂဲလ် ဘဇ် နဲ့ ဖဘ မှာလဲ လင့်ခ် လို့ရတယ်လေ BS: အေး ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့် ဝေါ့ဒ်ပရက်စ်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တယ် သယ်ရင်း 4:08 PM ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး me: အေး ဝေါ့ပရက်က နင်မြန်မာပြည်ကနေရေးရတာ ပိုအဆင်ပြေမယ် လေ 4:09 PM အစကနေ ပြန်လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အြ့တာနဲ့ပဲ လုပ် နေအုံး ငါ ၁ ဖိုင် ချင်းစီ ပို့ရမလား အကုန်တွဲပို့ရင် နင်ဒေါင်းရတာ အဆင်ပြေမလား စုစုပေါင်း ၉ မျာက်နှာပဲနော် 4:10 PM BS: ဇစ်ဖိုင်နဲ့ အကုန်တွဲပို့လိုက်သယ်ရင်း … ဟုတ်တယ် ၉မျက်နှာပဲ 4:11 PM me: ငါ ရီဗြူးတွေလဲ ကူးပေးမယ် သည်ရင်း မိုက်တယ်လေ စာအုပ်ထုတ်လို့ရတယ် ခိခိ
4:16 PM BS: ဂျူးလိုလား ဟားဟား 4:17 PM me: အေး နေအုံး ငါပြောချင်တာ နင်တွေ့လား ဟိုအက်ဆေးကနေ သူက အရမ်းကို အတ္တိသယဝုတ္တိ ဖြစ်နေတာလေ 4:19 PM BS: အေးဟုတ်တယ် ဖွဲ့နွဲ့လွန်းပြီး ဘဝမဆန်ဘူး 4:20 PM စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်း မရှိဘူး သူများကို ပြောရတာ အရသာရှိလိုက်တာ 4:22 PM me: အဲ့တာပြောတာလေ သူ့ကိုသူ ရှိတ်ရှိတ်များမှတ်နေလားမသိဘူး ရေးတာ က မကောင်းလိုက်တာ 4:23 PM ဟိဟိ BS: ဟားဟားဟား နင့်ဘဲလား 4:26 PM me: no par 4:27 PM တော်တော်ကိုခံစားလို့မရတာ ဂရမ်မာတွေမှားတာ ကိုမပြောသေးဘူးနော် 4:28 PM BS: ဟီးဟီး မြန်မာတွေ ဟစ်ဟော့ပ် ကို အီးလို ဆိုသလိုပေ့ါ ဘယ့်နှာကြီးတုန်း me: တော်လိုက်တော့ တော်လိုက်တော့ BS: မေးရမလို ခိခိ me: ဟိုဂျောက်ဂျက်နဲ့ သံသာဝင်းဆိုတာ ကြားဘူးတယ်မှလား ငါ့ကိုငါသတ်သေချင်တယ် 4:29 PM BS: ဟင့်အင်း မြန်မာတွေရဲ့ ဒုံချပ်ဒံချပ်ဆိုတာနဲ့ အာရုံကပြောင်းပြီးသား4:30 PM me: အေး ငါအဓိက ပြောချင်တာက နင်နောက်ပိုင်းရေးတဲ့ အီးကဗျာတွေက အဲ့လိုဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာပဲ တဂိုး ဟိဟိ 4:31 PM BS: သေရော 🙁 ဒါပေမယ့် A Visit ကဗျာလေးလောက်ထိကတော့ ကောင်းတုန်းပဲ ဒါတော့ နင်မငြင်းနဲ့ me: ငါပြန်ဘတ်မယ် နောက်ပိုင်းလို့ ငါပြောပါတယ် BS: အေး ပြန်ဖတ် 4:32 PM အဲဒါတော့ ငါလက်ခံတယ် နောက်ပိုင်းဟာတွေက ဗမာလိုရေးပြီးမှ ပြန်ထားတာတွေ me: အဲ့တာဆိုးတာပဲ BS: A Visit က အီးလို တွေးပြီး အီးလိုရေးတာ me: ရေးရင်လဲ မြန်မာလို မတွေးနဲ့လေ နင် အီးစာအုပ်တွေဒီလောက်ဘတ်နေတာ 4:33 PM BS: အင်း အဲဒီ နောက်ပိုင်းအီးတွေကို ဖြုတ်ချ ပစ်လိုက်ရမလားသယ်ရင်း နော် 4:35 PM me: အေး ကော်ပီတော့ထားပေါ့ ကဗျာကေိုပျက်စေတယ်ဟ 4:37 PM BS: အေးပါ
4:43 PM me: rr မမ ပို့လိုက်ပြီနော် 4:44 PM မရရင် ပြန်ပြော သေးသွားပေါက်ပြန်ပြီလား 4:46 PM BS: ဟေ့ ကို သွားရှာတာ 4:49 PM me: ရောက်လား BS: အေးရောက်ပြီးသယ်ရင်း ဒေါင်းလိုက်ဦးမယ် 4:52 PM me: kk ကျေးဇူးနော် BS: ဟီးဟီးဟီး 4:53 PM ငါ့မှာ နင့်လို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း စုစုဆောင်းဆောင်းရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးရှိလို့တော်သေးတယ် ဟေ့ စကားမစပ် 4:54 PM နင်အခုနကပို့လိုက်တဲ့ PSN ရဲ့ နှစ်နှစ်စီမံကိန်းမှာပါတဲ့ Workshop တွေက ဘယ်မှာလုပ်မှာလဲ … ငါ့ကောင်တွေကို ပြန်ရှင်းပြပေးမလို့ ငါဖတ်တာ သိပ်မရှင်းဘူး 4:55 PM me: သူက နှစ်နှစ် ပရိုဂရမ် အရွေးခံရရင် သင်တန်းတွေတက်ရမယ် သင်တန်းတွေက မတူတဲ့နိုင်ငံတွေမြှ လုပ်မှာ ငါ့ပရောဂျက်ကလဲခေါ်ဖို့ရှိတယ် ပေါ့စတစ်ကြီးပဲ အြ့လို သေချာဘတ်လေဟာ 4:56 PM BS: သင်တန်းတွေလုပ်မှာတွေ့တယ်လေဟာ .. ဘယ်မှာလုပ်မလဲ မရေးထားလို့ အိုကေ ငါတို့ဆီကကောင်တွေ လျှောက်ကြမယ်
5:03 PM me: ဖဘ မှာ ငါ့ပုံတွေတွေ့လား 5:04 PM BS: ဖင်တုံးလုံးပုံတွေလား ဟဲ့ နင် တက်တူး ထိုးထားတာလား 5:06 PM me: this is one secret i never tell
XOXO gossip girl LOL BS: ဟားဟား မိုက်တယ် တက်တူးက 5:09 PM me: နှစ်ခုနော် ဟဲ့ ငါပို့တာ နင့်ကဗျာတွေ ဒေါင်းလို့ရလား BS: အေး 30% ရောက်နေပြီ
5:14 PM me:ါသသိူကခု တငအ့ အ့အေ ဥြွ 5:15 PM BS: ဟေ
5:24 PM BS: အားပါးပါး သိုင်းကျူးသယ်ရင်း ဟေ့ me: အားပါးပါး ဘာပါး BS: ငါတော်တော်ရေးခဲ့တာပဲနော် me: ငါ့လောက်တော့မရှိသေးပါဘူးအေ 5:25 PM BS: ငါရေးတာတွေအဲလောက်များနေမယ် မထင်ခဲ့ဘူး နင်က လှတာကိုး ခိခိ အကြောင်းအရာပေါတာပေါ့ ငါက ကုန်ကြမ်းရှားတယ် me: အေး နင်က စကားလုံးပဲ ပေါတာ BS: စိတ်ကူးလည်း ပေါပါ့
Posted on November 3, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ရောက်တတ်ရာရာLeaveacomment on အာပလာ ဆားချက် (မဘတ်ချင်မဘတ်နဲ့)
ဟိုခြစ် ဒီခြစ် ဒွိဟ အချစ်
ဒွိဟ ခက်ခဲ ဘယ်သူမင်းကိုများ ကျန်စေ အထီးတည်းသာ ဒီလိုညများ မင်းကို ဘယ်သူ ပေးရက် ခဲ့သလဲ အမှောင်ယံညတွေ တယောက်တည်း တကိုယ်ရေ အထီးတည်းသာ ဒီလိုကျန်အောင် မင်းကထားခဲ့သလား Pre: ခေါင်လွန်းတဲ့ ဘဝမှာ ရေကြည်တပေါက်သာ တမ်းတခွင့်လည်း ရှားလွန်းနေသလား (တမ်းတတာတောင် ရှားလွန်းနေသတဲ့လား) မှောင်လွန်းတဲ့ညမှာ ရောင်နီလာမလား တွေးတိုင်းလဲ ဝေးလွန်းနေသလား Chorus: တကယ်ကို သွားရန်ခဲ ထားရန်မလွယ် ဘယ်နဲ့လဲ (ဘယ်လိုလုပ်မလဲ) အချစ်များစွာ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ အရဲစွန့်ကာ ဒွိဟခံစား (ဝေခွဲရန်ခက်) တကယ်ပါ ချစ်ရန်မလွယ် မုန်းရန်ခဲ ကိုယ်မဆုံးဖြတ်ရဲ အတွေးနဲ့တောင်မကြင်နာ ရင်မှာ ခါးသလား Ending: (အတွေးနဲ့တောင် မကြင်နာ ကိုယ်ကမှားသလား) A Chen 28th Oct 2010 Wednesday Immigration office, Bangkok Thailand
Posted on November 1, 2010 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, သီချင်း ခံစားမှုများ1 Comment on ဟိုခြစ် ဒီခြစ် ဒွိဟ အချစ်